ယူနိုက်တက်အား သူ့ကို မြန်မြန်ခေါ်ယူပါတော့လို့ ဖာနန်ဒက်စ် တိုက်တွန်းခဲ့ခြင်းလား - Sports Home Time
[Zawgyi] မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက်ဟာ ဒီနွေမှာ စပို့တင်း လစ္စဘွန်း ကွင်းလယ်လူ ဘရူနိူ ဖာနန်ဒက်စ်ကို ခေါ်ယူဖို့ စိတ်အား ထက်သန်နေပြီး အလေးအနက် ချိတ်ဆက်မှုတွေ ရှိထားပါတယ်။ ဖာနန်ဒက်စ်က အင်္ဂလန်သို့ သွားချင်ကြောင်း ဖွင့်ဟလိုက်ပြီး ယူနိုက်တက်ကို လိုလားဟန် ပြခဲ့ပါတယ်။
နယူးရော့ခ်ကို စပို့တင်း အသင်းဖော်တွေနဲ့အတူ မသွားခင် ပေါ်တူဂီသား ဖာနန်ဒက်စ်က – “ဈေးကွက်အကြောင်း ကျနော် စိတ်မဝင်စားပါဘူး။ ဒါကို ကျနော် အများကြီး ပြောခဲ့ပြီးသားပါ။ အခုချိန် ကျနော် လုပ်နိုင်တာက ကျနော် လေယာဉ် မီဖို့ လိုအပ်တယ်။ ဒါကြောင့် လေယာဉ်ကို ကျနော် လွဲချော်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ဒါက စပို့တင်း အတွက် ကျနော့်ရဲ့ နောက်ဆုံးပွဲ ဖြစ်မလား? ကျနော် မသိဘူး။ဒါကို နည်းပြက ဆုံးဖြတ်တာပါ။”
“ကျနော် အင်္ဂလန်မှာ ကစားလိုပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အဲ့အကြောင်း အခု ကျနော် မစဉ်းစားဘူး။ အပြောင်းအရွှေ့က ဒီရာသီမှာ ဖြစ်နိုင်လား ဆိုတော့ အဲ့ဒါက ကလပ် ဆုံးဖြတ်တဲ့ အချိန်အတိုင်းပါပဲ။ ကျနော် လုပ်လို့မရပါဘူး၊ ” လို့ ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။
ဖာနန်ဒက်စ်ဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ နွေရာသီကပဲ စပို့တင်း နဲ့ ငါးနှစ်စာချုပ် ချုပ်ဆိုခဲ့ပြီး တန်ကြေးက ပေါင် ၃၁ သန်း ရှိပါတယ်။ စပို့တင်းက ရောင်းချဖို့ ငြင်းပယ်ပေမယ့် ကလပ်တစ်ခုခုက ဒီပမာဏကို တတ်နိုင်ရင် အသက် ၂၄နှစ်အရွယ် ကစားသမားဟာ လျော်ကြေး ပေါင် ၄.၅သန်း ပေးရပါလိမ့်မယ်။
စပို့တင်းဟာ ဖာနန်ဒက်စ်ရဲ့ ပြောင်းရွှေ့ကြေးကို ပေါင် သန်း ၆၀ ဝန်းကျင် အလိုရှိနေမယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ မနှစ်က သူဟာ စပို့တင်း အတွက် ပွဲ ၅၀မှာ ၃၂ဂိုး သွင်းယူပြီး အကောင်းဆုံး ရာသီကို ပိုင်ဆိုင်ခဲ့ပါတယ်။ သူဟာ ဒီနွေ အစောပိုင်းမှာ နေရှင်းလိဂ် အောင်မြင်ခဲ့တဲ့ ပေါ်တူဂီနဲ့ နယ်သာလန်ရဲ့ အဖွင့်ပွဲမှာ ပါဝင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။
ပေါ်တူဂီသား ဘောလုံးရေးရာ ကျွမ်းကျင်သူ ဖီးလစ် ဒီရက်စ်က ဖာနန်ဒက်စ်ဟာ ပရီးမီးယားလိဂ် ရဲ့ ပြင်းထန်မှုနဲ့ ဘယ်လို အံဝင်အောင် လုပ်မလဲ ဆိုတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ အမြင်ကို ဖွင့်ဟခဲ့ပါတယ်။ ကွင်းလယ်တိုက်စစ် ကစားသမားဟာ အင်္ဂလန်မှာ အောင်မြင်ဖို့ လိုအပ်တဲ့ အရည်အချင်း တွေ အားလုံး ရှိတယ်လို့ ဆိုခဲ့တာပါ။
“ဖာနန်ဒက်စ်က ပရီးမီးယားလိဂ်မှာ အံဝင်နိုင်တယ်ဆိုတာ ကျနော် သံသယ မရှိပါဘူး။ သူက အကောင်းဆုံး ကစားသမားတွေနဲ့ အတူတူရော၊ ယှဉ်ပြီးပါ ကစားနိုင်တယ်၊ကျနော် နှစ်၂၀လောက် ဘောလုံး သတင်းထောက် လုပ်ခဲ့ပြီး ပွဲတွေ အများကြီး ကြည့်ခဲ့တာ။ မနှစ်က သူ လုပ်ခဲ့ သလိုမျိုး လုပ်နိုင်တဲ့သူ မမြင်ဖူးခဲ့ဘူး၊ ”
“သူက ၃၁ ဂိုး သွင်းထားတဲ့ ကွင်းလယ်တိုက်စစ် ကစားသမားပါ။ အကျော်ကြားဆုံး မဟုတ်တဲ့ ပေါ်တူဂီ ပြည်တွင်းလိဂ်နဲ့ ယူရိုပါလိဂ် မှာတောင် သူ့ရဲ့ အရည်အချင်းကို ခင်ဗျားတို့ ငြင်းပယ်လို့ မရပါဘူး။ သူက ပရီးမီးယားလိဂ် မှာ ချက်ချင်း အံဝင်နိုင်အောင် အဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီလို့ ကျနော် ထင်တယ်။ “လို့ ဒီရက်စ်က သုံးသပ် ပြောဆိုထားပါတယ်။
[Unicode] မနျခကျြစတာ ယူနိုကျတကျဟာ ဒီနှမှော စပို့တငျး လစ်စဘှနျး ကှငျးလယျလူ ဘရူနိူ ဖာနနျဒကျဈကို ချေါယူဖို့ စိတျအားထကျသနျနပွေီး အလေးအနကျ ခြိတျဆကျမှုတှေ ရှိထားပါတယျ။ ဖာနနျဒကျဈက အင်ျဂလနျသို့ သှားခငျြကွောငျး ဖှငျ့ဟလိုကျပွီး ယူနိုကျတကျကို လိုလားဟနျ ပွခဲ့ပါတယျ။
နယူးရော့ချကို စပို့တငျး အသငျးဖျောတှနေဲ့အတူ မသှားခငျ ပျေါတူဂီသား ဖာနနျဒကျဈက – “စြေးကှကျအကွောငျး ကနြျော စိတျမဝငျစားပါဘူး။ ဒါကို ကနြျော အမြားကွီး ပွောခဲ့ပွီးသားပါ။ အခုခြိနျ ကနြျော လုပျနိုငျတာက ကနြျော လယောဉျ မီဖို့ လိုအပျတယျ။ ဒါကွောငျ့ လယောဉျကို ကနြျော လှဲခြျောမှာမဟုတျပါဘူး။ဒါက စပို့တငျး အတှကျ ကနြေျာ့ရဲ့ နောကျဆုံးပှဲ ဖွဈမလား? ကနြျော မသိဘူး။ဒါကို နညျးပွက ဆုံးဖွတျတာပါ။”
“ကနြျော အင်ျဂလနျမှာ ကစားလိုပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ အဲ့အကွောငျး အခု ကနြျော မစဉျးစားဘူး။ အပွောငျးအရှကေ့ ဒီရာသီမှာ ဖွဈနိုငျလား ဆိုတော့ အဲ့ဒါက ကလပျ ဆုံးဖွတျတဲ့ အခြိနျအတိုငျးပါပဲ။ ကနြျော လုပျလို့မရပါဘူး၊ ” လို့ ပွောဆိုခဲ့ပါတယျ။
ဖာနနျဒကျဈဟာ ပွီးခဲ့တဲ့ နှရောသီကပဲ စပို့တငျး နဲ့ ငါးနှဈစာခြုပျ ခြုပျဆိုခဲ့ပွီး တနျကွေးက ပေါငျ ၃၁ သနျး ရှိပါတယျ။ စပို့တငျးက ရောငျးခဖြို့ ငွငျးပယျပမေယျ့ ကလပျတဈခုခုက ဒီပမာဏကို တတျနိုငျရငျ အသကျ ၂၄နှဈအရှယျ ကစားသမားဟာ လြျောကွေး ပေါငျ ၄.၅သနျး ပေးရပါလိမျ့မယျ။
စပို့တငျးဟာ ဖာနနျဒကျဈရဲ့ ပွောငျးရှကွေ့ေးကို ပေါငျ သနျး ၆၀ ဝနျးကငျြ အလိုရှိနမေယျလို့ ထငျပါတယျ။ မနှဈက သူဟာ စပို့တငျး အတှကျ ပှဲ ၅ဝမှာ ၃၂ဂိုး သှငျးယူပွီး အကောငျးဆုံး ရာသီကို ပိုငျဆိုငျခဲ့ပါတယျ။ သူဟာ ဒီနှေ အစောပိုငျးမှာ နရှေငျးလိဂျ အောငျမွငျခဲ့တဲ့ ပျေါတူဂီနဲ့ နယျသာလနျရဲ့ အဖှငျ့ပှဲမှာ ပါဝငျနိုငျခဲ့ပါတယျ။
ပျေါတူဂီသား ဘောလုံးရေးရာ ကြှမျးကငျြသူ ဖီးလဈ ဒီရကျဈက ဖာနနျဒကျဈဟာ ပရီးမီးယားလိဂျ ရဲ့ ပွငျးထနျမှုနဲ့ ဘယျလို အံဝငျအောငျ လုပျမလဲ ဆိုတာနဲ့ ပတျသကျပွီး စိတျဝငျစားစရာကောငျးတဲ့ အမွငျကို ဖှငျ့ဟခဲ့ပါတယျ။ ကှငျးလယျတိုကျစဈ ကစားသမားဟာ အင်ျဂလနျမှာ အောငျမွငျဖို့ လိုအပျတဲ့ အရညျအခငျြး တှေ အားလုံး ရှိတယျလို့ ဆိုခဲ့တာပါ။
“ဖာနနျဒကျဈက ပရီးမီးယားလိဂျမှာ အံဝငျနိုငျတယျဆိုတာ ကနြျော သံသယ မရှိပါဘူး။ သူက အကောငျးဆုံး ကစားသမားတှနေဲ့ အတူတူရော၊ ယှဉျပွီးပါ ကစားနိုငျတယျ၊ကနြျော နှဈ၂ဝလောကျ ဘောလုံး သတငျးထောကျ လုပျခဲ့ပွီး ပှဲတှေ အမြားကွီး ကွညျ့ခဲ့တာ။ မနှဈက သူ လုပျခဲ့ သလိုမြိုး လုပျနိုငျတဲ့သူ မမွငျဖူးခဲ့ဘူး၊ ”
“သူက ၃၁ ဂိုး သှငျးထားတဲ့ ကှငျးလယျတိုကျစဈ ကစားသမားပါ။ အကြျောကွားဆုံး မဟုတျတဲ့ ပျေါတူဂီ ပွညျတှငျးလိဂျနဲ့ ယူရိုပါလိဂျ မှာတောငျ သူ့ရဲ့ အရညျအခငျြးကို ခငျဗြားတို့ ငွငျးပယျလို့ မရပါဘူး။ သူက ပရီးမီးယားလိဂျ မှာ ခကျြခငျြး အံဝငျနိုငျအောငျ အဆငျသငျ့ဖွဈနပွေီလို့ ကနြျော ထငျတယျ။ “လို့ ဒီရကျဈက သုံးသပျ ပွောဆိုထားပါတယျ။
ဂွာဒီယိုလာရဲ့ နည်းပြမှုနဲ့ မိုးထိ ခြေစွမ်းတက်ဦးမယ့် အသင်းဖော်အကြောင်း ဝေါ်ကာ ဖွင့်ဟ